काे महिला हुन् जसले १० हजार जनासँग सेक्स गरिन ? – Online National Network
काे महिला हुन् जसले १० हजार जनासँग सेक्स गरिन ?
१३ मंसिर २०७४, बुधबार ०३:२७
एजेन्सी—अष्ट्रेलियाकी एक महिला अहिले चर्चामा छिन् । ३९ वर्षकी ग्वाइनेथ मन्टेनग्रो आफ्नो द सेक्रेट ट्याबु नामको किताबमा गरिएको खुलासाका कारण चर्चामा आएकी हुन् । पेशाले यौनकर्मी रहेकी ग्वाइनेथले आफ्नो किताबमा यौनपेशामा रहँदा पछिल्लो १५ वर्षमा आफुले हासिल गरेका अनुभवलाई सँगालेकी छिन् ।
उनले यस किताबमा एक सफल यौनकर्मी बन्ने टिप्सहरु पनि प्रस्तुत गरेकी छिन् । किताबमा उनले आफुले अहिलेसम्म १० हजार मानिससँग सेक्स गरेको खुलासा गरेकी छिन् । आफुमाथि सामुहिक बलात्कार भएसँगै उनले यौन पेशा अँगाल्ने निर्णय गरेकी थिइन् । आफ्नो पहिलो किताबमा उनले आफ्नो जिवनका उतारचढावका बारेमा उल्लेख गरेकी छिन् ।
उनले यौनपेशा छाडेर व्यवसायिक पाइलट बनेको र पछि गम्भीर रोग लागेपछि उपचारका लागि पैसा जुटाउन पुनः यौनपेशामा लागेको खुलासा गरेकी छिन् ।ग्वाइनेथले अहिले चाहीँ यौनपेशा छाडिसकेकी छिन् । केवल जवान महिलाहरु मात्र यो पेशामा टिक्नसक्ने उनको अनुभव छ । अहिले उनी परिवारसँग छिन् र व्यवसाय पनि गर्छिन्।